Astaamaha guud ee fjords-ka Norway | Safarka Absolut
Astaamaha guud ee fjords-ka Noorway
Susana Maria Urbano Mateos | | Norwey
Fjords-ka Norwey Iyagu waa kuwa ugu caansan adduunka laakiin sidoo kale kuwa ugu dahsoon tababbarkooda iyo kala duwanaanshahooda awgood sifooyinka kuxiran fjord taas oo aan ku ogaanayno. In kasta oo ay dhammaantood leeyihiin astaamo ay wadaagaan, haddana dhammaantood waxay leeyihiin adduun u gaar ah oo ka dhigaya mid mudan in la arko.
1 Waa maxay Fjord?
2 Fjords muhiim ah oo Norwey ah
Un fjord waa bad dheer, cidhiidhi ah, mool dheer oo leh dhul adag oo sedex gees ah. Furitaanka dhanka badda waxaa loo yaqaan ' afka fjord, waana mid aan badnayn. Qaybta gudaha ee fjord waxaa loo yaqaan ' salka badda. Haddii qaab dhismeedka juquraafiyeedku ka ballaaran yahay inta uu dheer yahay, ma aha fjord, ee waa biyo-biyood ama soo-gal.
Fjords waxaa sameeyay afaf waaweyn oo baraf ah in, illaa da 'kala duwan oo baraf ah, ay qaabeeyeen muuqaalka. Fjord waa sidaas dooxada U-qaabeysan ee biyaha hoostiisa ah, xeebta galbeedna, dooxadan waxaa inta badan ku hareeraysan muuqaal qurux badan oo buuraley ah.
Horta qaybta barafka, sandbar ayaa la dhigey kaas oo sameeya xannibaadda biyaha hoostooda, oo badanaa loo yaqaan "Marinnada badda" ama "RA", meesha fjord uusan gacmeed lahayn.
Marinkan gacmeed ee afka fjord, waa sababta ay fjords badanaa uga xasilloon yihiin badda furan. Sidaa darteed, fjords badanaa waa dekedo dabiici ah.
Fjord waa mid ka mid ah ereyada noorwiijiga ah ee ku baxay caalamka, gaar ahaan Ingiriisiga, oo si toos ah loogu isticmaalo. Fjord wuxuu ka yimid ereyga Nordic "fjǫrðr". Tan waxaa u sabab ah, marki hore, erayga Indo-Yurub ee hore loo yaqaan 'prtús', oo macnaheedu yahay 'tag', 'dhaaf' ama 'in la dhigo dhinaca kale.
Fjord ugu dheer adduunka waa Dhibcaha Axad gudaha cagaaran (350 km), laakiin gobolka Galbeedka Norwey (Fjord Norway) ayaa leh labada dhibcood ee soo socota ee liiska, oo leh el Sognefjord (203 km), iyo kan fjord Halis (179 km)
Maxaa dhacaya marka qofku safro Norwey fjord, waa sheeko qurux badan oo biyo ah, oo leh cutubyo badan. Fjords waxaa lagu xardhay xaashi weyn oo baraf ah oo ilaa saddex kiilomitir dhumuc ah oo daboolay waqooyiga Yurub iyada oo taxane ah oo da 'baraf ah. Sida aad u dhaygagayso buuraha dhaadheer ee ku wareegsan el Nærøyfjord, fjord ugu cidhiidhsan adduunka, waad qaddarin kartaa awoodda baaxadda weyn leh ee xoogaggan dabeecadda ah.
Fjords muhiim ah oo Norwey ah
Fjord wuxuu dhererkiisu yahay 15 km wuxuuna ku jiraa liiska UNESCO meelaha hidaha adduunka laga soo bilaabo 2005. Waxay soo jiidataa dadka safarka ah quruxda daahirka ah. Fjord-ka waxaad ku arkeysaa beero laga taagay buuraha, halkaas oo ay adag tahay in laga rumeysto in qofna ku noolaan karo. Maanta waa laga tagay, laakiin waxaa lagu heli karaa socodka jidadka iyo doonnida. El Geirangerfjord waa mid kamid ah meelaha loo dalxiis tago galbeedka Norwey.
Madaxa fjord, waxaan ka heli karnaa Geiranger. Dhexda, way ku kulmaan "Toddobada gabdhood ee walaalaha ah", biyo-dhac leh oo leh dhicitaan dhererkiisu yahay qiyaastii 300 mitir. Magaca ayaa soo kacay dhicitaannada dartiis, meel fog, oo u eg timaha toddobada dumarka ah. Dhinaca ka soo horjeedka fjord, waa biyo-dhaca "Friaren« (guur doon) Muuqaalkiisa u eg-dhalada, sida muuqata nasiib-darro nasiib-darro ah, (oo sidaas darteed balwad u leh dhalada), asagoo sugaya jawaabta soo jeedintiisa gabdhaha walaalaha ah.
179 km dheer, labaad ee ugu dheer Norway, iyo kan saddexaad ee ugu dheer adduunka. Waa kan ugu qoto dheer oo leh wax ka badan 800 mitir. Halis waxay caan ku tahay geedo midho leh had iyo jeer ubax. Ku glacier Folgefonni wuxuu ku yaal dhinaca koonfureed ee fjord, aaggan sidoo kale waa mid cajiib ah TrolltungaWaa socod dheer ka hor intaadan gaarin, laakiin xaqiiqdii dadaal badan ayaa abaal marintiisa leh.
Cufnaanta beeraha salmon ayaa samaysa Hardangerfjord, noqo mid ka mid ah afarta gobol ee adduunka ugu waxsoosaarka badan (ogow inay sharci darro tahay kalluunka loo yaqaan 'salmon' oo aan ruqsad looga haysan fjord).
Fjord-kan waa 42 km oo dherer ah wuxuuna ku dhowaad 500 mitir ku jiraa qoto dheer. Kuwa caanka ah Qalbi dhagax iyo Kjerag waxay ku taalaa dhinaca woqooyi. Buuraha dhaadheer awgood iyo harooyinka waaweyn ee ku yaal dhulka sare, el Lysefjord Waxaa loo isticmaalaa jiilka tamarta korontada, iyadoo halbeeg u ah noocan ah tamarta la cusbooneysiin karo, iyadoo lagu xisaabtamayo in mid ka mid ah dhirtooda ay ku soo dhacday 740 mitir. Buuruhu, markay ugu sarreeyaan, 1 mitir ayay ka sarreeyaan heerka badda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Astaamaha guud ee fjords-ka Noorway
Sawirka glacier-ka ma ahan Lysefjord, wuxuu ka yimid Calafate ee Argentina.
Dharka hidaha iyo dhaqanka Dutch